इक्यान शैक्षिक मेलामा वैदेशिक शिक्षाबारे सम्पूर्ण जानकारी – Arthik Awaj
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर १७ गते सोमबार १३:२२ मा प्रकाशित
के तपाईं उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ ? कुन देशमा गएर कस्तो विषय पढ्ने ? कुन युनिभर्सिटी तथा कलेजमा अध्ययन गर्ने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? यदि तपाईं अन्योलमा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित पोखरामा ‘इक्यान शैक्षिक मेला’ हुँदैछ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्कीको आयोजना र व्यवस्थानमा यही मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म पोखराको सभागृह हलमा मेला हुने इक्यान कास्कीका अध्यक्ष भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी र अभिभावकका लागि मेला निकै उपलब्धीपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक शिक्षाबारे सम्पूर्ण जानकारी मेलामा प्रदान गरिनेछ ।’